သမီးပိုက်ဆံမလောက်လို့ပါလို့ ပြောလာတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးကို ထမင်းရောင်းပေးတဲ့ ဆိုင်ရှင် အဒေါ်ကြီးနဲ့ ဦးလေးတို့ရဲ့အဖြစ် – Media Sharing
ကျောင်းနှင့် အလှမ်းမဝေးလှတဲ့ ထမင်းဆိုင် သေးသေးလေးတစ်ဆိုင်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ထမင်းလာမှာစားတယ် ဆိုင်ရှင်နားကပ်ပြီး လေသံတိုးတိုးလေးနှင့်
* ဟိုလေ… သမီးကို ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက် ရောင်းပေးလို့ ရလားခင်ဗျ သမီးပိုက်ဆံမလောက်လို့ပါ… ရပါတယ်သမီးရယ် ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဆိုင်ရှင်အဒေါ် ကြီးက ယောက်ျားရေ ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက် လုပ်ပေးပါဦး အော်…ဟင်းချိုနဲ့ ငါးပိရည်လည်း ထည့်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်…
ယောက်ျားဖြစ်သူက ထမင်းအဖြူတစ်ပွဲကိုကောင်မလေးထိုင်နေတဲ့ ခုံမှာသွားချပေးလိုက်တယ် ကောင်မလေးက သူ့ကိုထပ်မှာတယ်
ဟိုလေ… သမီးအတွက်နောက်ထပ် ဟင်းမပါတဲ့ ထမင်းဗလာတစ်ထုတ် ထပ်လုပ်ပေးလို့ ရလားရှင့်……. ကောင်မလေးခမျာ ပြောသာပြောနေရတယ် သူ့မျက်နှာက အတော်လေး အားနာနေတဲ့ပုံပါ….
#ရပါတယ်သမီးရယ် ဒါနဲ့ ဒီထမင်းထုတ်က….ဘာသွားလုပ်ဖို့လည်း
* သမီး ညနေကြရင် စားဖို့ပါ….ဦး ဆိုင်ရှင်အဖိုးကြီးက သူ့ကိုဂရုနာသက်တဲ့ မျက်လုံးနှင့်ကြည့်ပြီး…. အင်း..!ကောင်မလေးကြည့်ရတာ မြို့မှာသာကျောင်းလာတက်တယ် အိမ်ကမိဘတွေက ငွေကြေးအခက်ခဲ ရှိပုံရတယ်…!
အမှန်တကယ်တော့ သူတို့လင်မယားကလည်း တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားပါ ဒီဆိုင်နေရာလေးကို သူများငှားပေးလို့သာ ကံကောင်းပြီးဈေးရောင်းရတဲ့ဘဝပါ မရှိသူမို့လည်း မရှိသူကိုစာနာတတ်တဲ့စိတ်က သူတို့လင်မယားမှာ ရှိပြီးသားပါလေ…
ဟင်းအိုးမှ ဟင်းတွေကိုခတ်ပြီး ထမင်းများနဲ့ သူဖုံးဖိပြီးထည့်နေမိသည် ဒါကို မိန်းမဖြစ်သူကမြင်တော့ …
“ရှင်ဘာလုပ်နေတာလည်း … #ကောင်မလေးအတွက် ထမင်းထည့်ပေးနေတာလေ
” အော်..ရှင်ကလည်းတုံးလိုက်တာ ပေးချင်နေမှတော့ ဝှက်ပြီးပေးစရာလား ဒီအတိုင်းပေးလည်း ရလျှက်သားနဲ့ ဘာလဲ ရှင်က ကျွန်မမြင်မှာ ကြောက်လို့လား ကြောက်စရာမဟုတ်တာရှင်ကျွန်မလည်း စာနာထောက်ထားတတ်တဲ့ မိန်းမသားတယောက်ပါ #ဟာ…!ဒီမိန်းမ ဘာတွေလာပြောနေတာလည်း ဒီအတိုင်း ဗြောင်ပေးတော့ သူ့ကို အထင်သေးရာ ရောက်သွားမှာပေါ့ဟ ပြီးတော့လည်း သူရှက်သွားရင်နောက်ဆို တို့ဆိုင်ကို သူဘယ်လိုလုပ်ပြီး လာရဲတော့မလည်း
မိန်းမဖြစ်သူက လင်ယောက်ျားကို ကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်မိသည် အမလေး ငါ့ယောက်ျားက သနားတတ်ရုံ တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲ လူတစ်ယောက်ကို အဖက်ဖက်က စာနာစိတ်ကလည်း ကြီးမားပါလေရဲ့ …..
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကောင်မလေးဟာ သူတို့ဆိုင်မှာလာပြီး ကျောင်းပြီးသည်အထိ ထမင်းလာစားခဲ့တယ် သူတို့လင်မယားကလည်း တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးလေအောင် ဟင်းအမျိုးမျိုးကို ထမင်းဖုံး၍ ပေးလေ့ရှိခဲ့တယ်… ကျောင်းပြီးသွားတော့ ကောင်မလေးကသူတို့ဆိုင်ကို ၁၀ နှစ်ကြာမျှတောင် တစ်ခါမှ ရောက်မလာတော့ပါ
တစ်နေ့တော့ မြေပိုင်ရှင်က မြေကိုရောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဒီနေရာက ရွေ့ပြောင်းရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း လာပြောသောအခါ လင်မယားနှစ်ယောက်သား စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီး အိမ်မှာ ထိုင်မိူင်နေကြစဉ် သူတို့နေတဲ့ အိမ်နားသို့ ကားတစ်စီးက လာ၍ထိုးရပ်လာသည် လူတယောက်က ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး သူတို့ရှိရာ လျှောက်၍လာသည်..
ကျွန်တော်က ကုမ္မဏီတစ်ခုရဲ့ မန်နေဂျာတစ်ဦးပါခင်ဗျ ကျွန်တော့်သူဌေးမက အဒေါ်တို့လင်မယားချက်တဲ့ ဟင်းကို အရမ်းကြိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကုမ္မဏီအနီးမှာ ဆိုင်ဖွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားလို့ပါ
လင်မယားနှစ်ယောက် အံ့အားသင့်သွားသည် သူတို့ဆိုင်စုတ်စုတ်လေးမှာ ဘယ်လိုသူဌေးကများ လာပြီးစားဖူးပါလိမ့် ပြီးတော့လည်း သူတို့မှာရှိတာက အိုးစုတ်ခွက်စုတ်တွေမို့ ကုမ္မဏီကြီးအနား ထမင်းဆိုင်သွားဖွင့်ရမှာ
ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်လို့ သူတို့ငြင်းဆိုခဲ့တယ်
အဲဒီအတွက် မပူပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော့်သူဌေးမက အစစ အရာရာ ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ သွားပြီး ချက်ပြုတ်ရုံသက်သက်ပါ…
အဲဒီသူဌေးမက ဘာဖြစ်လို့ သူတို့အပေါ် ဒီလောက် ကောင်းနေရတာလည်းဆိုတာ သူတို့နားမလည်ခဲ့ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့အပေါ် ကောင်းတဲ့သူဌေးမကြီးက တစ်ချိန်က သူတို့ဆီက ထမင်းတစ်ထုပ် လုပ်ကျွေးခဲ့ဖူးတဲ့
ဦးနဲ့အဒေါ်သာ ကျွန်မကို မကူညီပေးခဲ့ရင် ကျွန်မလဲ..ဒီလိုဘဝမျိုး ရောက်လာမည်မဟုတ် အခုလို ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရတာ သမီး
အရမ်းဝမ်းသာတယ်ဗျာ လိုတာရှိရင်ပြောပါ ဘာမှ အားမနာကြပါနဲ့ …. (စေတနာထားတတ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး အဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီး စာနာမူ့လည်း ထားတတ်ရမယ်
ယခုလို IT ခေတ်မှာ မရှိသူကို ကူညီတတ်ကြတဲ့ သူတစ်ချို့သတိထားသင့်တယ် သူတစ်ပါးကိုကူညီးလိုလျှင် သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ထည့်တွေးသင့်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကို ပုံရိုက်ပြီး တင်ပြနေစရာမလိုဘူး စေတနာအောက်မှာ သူတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေ နစ်ပျောက်သွားတတ်လို့ပါ…..)
ကြောငျးနှငျ့ အလှမျးမဝေးလှတဲ့ ထမငျးဆိုငျ သေးသေးလေးတဈဆိုငျမှာ ကောငျမလေးတဈယောကျက ထမငျးလာမှာစားတယျ ဆိုငျရှငျနားကပျပွီး လသေံတိုးတိုးလေးနှငျ့
* ဟိုလေ… သမီးကို ထမငျးအလှတျတဈပှဲလောကျ ရောငျးပေးလို့ ရလားခငျဗြ သမီးပိုကျဆံမလောကျလို့ပါ… ရပါတယျသမီးရယျ ပွောပွောဆိုဆိုနှငျ့ ဆိုငျရှငျအဒျေါ ကွီးက ယောကျြားရေ ထမငျးအလှတျတဈပှဲလောကျ လုပျပေးပါဦး အျော…ဟငျးခြိုနဲ့ ငါးပိရညျလညျး ထညျ့ပေးဖို့မမနေဲ့နျော…
ယောကျြားဖွဈသူက ထမငျးအဖွူတဈပှဲကိုကောငျမလေးထိုငျနတေဲ့ ခုံမှာသှားခပြေးလိုကျတယျ ကောငျမလေးက သူ့ကိုထပျမှာတယျ
ဟိုလေ… သမီးအတှကျနောကျထပျ ဟငျးမပါတဲ့ ထမငျးဗလာတဈထုတျ ထပျလုပျပေးလို့ ရလားရှငျ့……. ကောငျမလေးခမြာ ပွောသာပွောနရေတယျ သူ့မကျြနှာက အတျောလေး အားနာနတေဲ့ပုံပါ….
#ရပါတယျသမီးရယျ ဒါနဲ့ ဒီထမငျးထုတျက….ဘာသှားလုပျဖို့လညျး
* သမီး ညနကွေရငျ စားဖို့ပါ….ဦး ဆိုငျရှငျအဖိုးကွီးက သူ့ကိုဂရုနာသကျတဲ့ မကျြလုံးနှငျ့ကွညျ့ပွီး…. အငျး..!ကောငျမလေးကွညျ့ရတာ မွို့မှာသာကြောငျးလာတကျတယျ အိမျကမိဘတှကေ ငှကွေေးအခကျခဲ ရှိပုံရတယျ…!
အမှနျတကယျတော့ သူတို့လငျမယားကလညျး တဈနလေု့ပျ တဈနစေ့ားပါ ဒီဆိုငျနရောလေးကို သူမြားငှားပေးလို့သာ ကံကောငျးပွီးဈေးရောငျးရတဲ့ဘဝပါ မရှိသူမို့လညျး မရှိသူကိုစာနာတတျတဲ့စိတျက သူတို့လငျမယားမှာ ရှိပွီးသားပါလေ…
ဟငျးအိုးမှ ဟငျးတှကေိုခတျပွီး ထမငျးမြားနဲ့ သူဖုံးဖိပွီးထညျ့နမေိသညျ ဒါကို မိနျးမဖွဈသူကမွငျတော့ …
“ရှငျဘာလုပျနတောလညျး … #ကောငျမလေးအတှကျ ထမငျးထညျ့ပေးနတောလေ
” အျော..ရှငျကလညျးတုံးလိုကျတာ ပေးခငျြနမှေတော့ ဝှကျပွီးပေးစရာလား ဒီအတိုငျးပေးလညျး ရလြှကျသားနဲ့ ဘာလဲ ရှငျက ကြှနျမမွငျမှာ ကွောကျလို့လား ကွောကျစရာမဟုတျတာရှငျကြှနျမလညျး စာနာထောကျထားတတျတဲ့ မိနျးမသားတယောကျပါ #ဟာ…!ဒီမိနျးမ ဘာတှလောပွောနတောလညျး ဒီအတိုငျး ဗွောငျပေးတော့ သူ့ကို အထငျသေးရာ ရောကျသှားမှာပေါ့ဟ ပွီးတော့လညျး သူရှကျသှားရငျနောကျဆို တို့ဆိုငျကို သူဘယျလိုလုပျပွီး လာရဲတော့မလညျး
မိနျးမဖွဈသူက လငျယောကျြားကို ကွညျ့ပွီးပီတိဖွဈမိသညျ အမလေး ငါ့ယောကျြားက သနားတတျရုံ တဈမြိုးတညျးမဟုတျပဲ လူတဈယောကျကို အဖကျဖကျက စာနာစိတျကလညျး ကွီးမားပါလရေဲ့ …..
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကောငျမလေးဟာ သူတို့ဆိုငျမှာလာပွီး ကြောငျးပွီးသညျအထိ ထမငျးလာစားခဲ့တယျ သူတို့လငျမယားကလညျး တဈနတေ့ဈမြိုး
မရိုးလအေောငျ ဟငျးအမြိုးမြိုးကို ထမငျးဖုံး၍ ပေးလရှေိ့ခဲ့တယျ… ကြောငျးပွီးသှားတော့ ကောငျမလေးကသူတို့ဆိုငျကို ၁၀ နှဈကွာမြှတောငျ တဈခါမှ ရောကျမလာတော့ပါ
တဈနတေ့ော့ မွပေိုငျရှငျက မွကေိုရောငျးလိုကျပွီးဖွဈကွောငျး ဒီနရောက ရှပွေ့ောငျးရတော့မညျဖွဈကွောငျး လာပွောသောအခါ လငျမယားနှဈယောကျသား စိတျပကျြလကျပကျြဖွဈပွီး အိမျမှာ ထိုငျမိူငျနကွေစဉျ သူတို့နတေဲ့ အိမျနားသို့ ကားတဈစီးက လာ၍ထိုးရပျလာသညျ လူတယောကျက ကားပျေါမှ ဆငျးပွီး သူတို့ရှိရာ လြှောကျ၍လာသညျ..
ကြှနျတျောက ကုမ်မဏီတဈခုရဲ့ မနျနဂြောတဈဦးပါခငျဗြ ကြှနျတေျာ့သူဌေးမက အဒျေါတို့လငျမယားခကျြတဲ့ ဟငျးကို အရမျးကွိုကျတဲ့ သူတဈယောကျပါ အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်မဏီအနီးမှာ ဆိုငျဖှငျ့ပေးဖို့ တောငျးဆိုထားလို့ပါ
လငျမယားနှဈယောကျ အံ့အားသငျ့သှားသညျ သူတို့ဆိုငျစုတျစုတျလေးမှာ ဘယျလိုသူဌေးကမြား လာပွီးစားဖူးပါလိမျ့ ပွီးတော့လညျး သူတို့မှာရှိတာက အိုးစုတျခှကျစုတျတှမေို့ ကုမ်မဏီကွီးအနား ထမငျးဆိုငျသှားဖှငျ့ရမှာ
ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျလို့ သူတို့ငွငျးဆိုခဲ့တယျ
အဲဒီအတှကျ မပူပါနဲ့ဗြာ ကြှနျတေျာ့သူဌေးမက အစစ အရာရာ ပွငျဆငျထားပွီးသားပါ သှားပွီး ခကျြပွုတျရုံသကျသကျပါ…
အဲဒီသူဌေးမက ဘာဖွဈလို့ သူတို့အပျေါ ဒီလောကျ ကောငျးနရေတာလညျးဆိုတာ သူတို့နားမလညျခဲ့ နောကျဆုံးတော့ သူတို့အပျေါ ကောငျးတဲ့သူဌေးမကွီးက တဈခြိနျက သူတို့ဆီက ထမငျးတဈထုပျ လုပျကြှေးခဲ့ဖူးတဲ့
ဦးနဲ့အဒျေါသာ ကြှနျမကို မကူညီပေးခဲ့ရငျ ကြှနျမလဲ..ဒီလိုဘဝမြိုး ရောကျလာမညျမဟုတျ အခုလို ပွနျလညျကြေးဇူးဆပျခှငျ့ရတာ သမီး
အရမျးဝမျးသာတယျဗြာ လိုတာရှိရငျပွောပါ ဘာမှ အားမနာကွပါနဲ့ …. (စတေနာထားတတျရုံနဲ့ မလုံလောကျဘူး အဖကျဖကျကကွညျ့ပွီး စာနာမူ့လညျး ထားတတျရမယျ
ယခုလို IT ခတျေမှာ မရှိသူကို ကူညီတတျကွတဲ့ သူတဈခြို့သတိထားသငျ့တယျ သူတဈပါးကိုကူညီးလိုလြှငျ သူ့ရဲ့ဂုဏျသိက်ခာကိုလညျး ထညျ့တှေးသငျ့တယျ
ကိုယျ့ရဲ့စတေနာကို ပုံရိုကျပွီး တငျပွနစေရာမလိုဘူး စတေနာအောကျမှာ သူတဈပါးရဲ့ဂုဏျသိက်ခာတှေ နဈပြောကျသှားတတျလို့ပါ…..)
အလုပ်သမား (၅၀) နီးပါးကို တစ်ယောက် (၁၀) သိန်းစီ ပေးဝေတဲ့ အောင်သပြေအလုပ်ပိုင်ရှင်လေး(ရုပ်/သံ)